Home News Xog:-Maxeey tahay Sababta Madaxweyne Farmaajo u Diiday in uu Saxiixo Qaraarka DP-WORD
Xog:-Maxeey tahay Sababta Madaxweyne Farmaajo u Diiday in uu Saxiixo Qaraarka DP-WORD
Xildhibaanada labada gole ee barlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay dood kulul kadib meel mariyeen xeer dalka Soomaaliya looga mamnoocayo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta oo heshiisyo gacansi kula jirta Puntland iyo Soomaaliland.
Mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa ay si wadajir ah u meel mariyeen xeerka dalka looga mamnoocayo shirkadda DP World, waxaana go’aankaasi siweyn u soo dhoweeyey shacabka kunool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Maalmo kooban kadib go’aankaasi waxaa dood kulul kayeeshay xeerkaasi si guudna u meel mariyey xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya oo miiska u saaray xeerkaasi xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Go’aanka labada aqal ee Soomaaliya kadib waxaa bilowday khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay xukuumadda Soomaaliya iyo gudoonkii xilligaasi ee golaha shacabka Soomaaliya kaasi oo sababay in ugu dambayn xilka laga xayuubiyo gudoomiyihii golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Sidoo kale, waxaa cirka isku shareeray xiisadda diblumaasiyadeed ee u dhexaysa Imaaraadka iyo Soomaaliya, waxaana ugu dambayn xukuumadda Dubai ay ka guurtay kulliyadda Tababarka ciidamada General Gordan ee magaalada Muqdisho iyo xarumo isugu jirey kuwa caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo Muqdisho kuyaal.
Xeerkii ay meel mariyeen labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya ayeysan jirin ilaa hadda cid ka hadashay waxaana falanqeeyayaal lahadlay Warbaahinta ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Khayre ay ka fiirsanayaan saxiixisa maadaama aysan si rasmi ah gacanta ugu hayn Boosaaso iyo Berbera oo shirkadda DP World ay gacanta ku hayso.
Xiriirkii Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa sii xumaaday waxaana xukuumadda Hargaysa ka arrimisa ay sheegtay inay ka baxday wada xaajoodkii Koonfurta Soomaaliya kadib xeerka lagu cayrinayo DP World iyo mashaariic laga xanibay.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhowaan ka soo laabtay safar uu kutegey dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu siweyn u dhaliilay siyaasadda dowladda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Soomaaliya aysan sinaba uga maarmin dalka Imaaraadka Carabta.